ဇွဲဆု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Drama, Essays.. » ဇွဲဆု	16
Posted by naywoon ni on Apr 15, 2015 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 16 comments
ဇွဲဆု ပူ​လောင် ပြင်းရှတဲ့ ဧပြီလရဲ့ ​နေလည်​ခင်း အပူဒဏ်​ကိုအလူးအလဲ ခံစားရင်းက ည​နေပိုင်း​ရောက်​​တော့ လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​ဖက်​ ထွက်​လာခဲ့တယ်​ ။ ​နေ၀န်းနီ တို့မြို့မှာက လည်​ပတ်​စရာ မရှိ ပန်းခြံ မရှိ ရုပ်​ရှင်​ရုံ မရှိ (ရုံအခွံ​တော့ရှိ​သေး တစ်​နှစ်​လုံး​နေမှ ဝါဆိုလပြည့်​​နေ့ရယ်​ တန်​​ဆောင်​တိုင်​ ​လေးငါးရယ်​ရယ်​ပဲ ပြတယ်​ ) မာဆတ်​ ​ကေတီဗွီ (No) နိုး ။ ကန်​ကြီးကြီးမားမားဆိုတာလည်း နတ္တ္ထိ ။ စိတ်​​ပြေလက်​​ပျောက်​ လမ်း​လျှောက်​ထွက်​စရာမရှိ ။ ပိုက်​ဆံ ​လေးပိုပိုလျှံလျှံ ရှိရင်​​တော့ ​ဖော်​​ဖော်​​ရွေ​ရွေ ​လောကွပ်​​လျှော်​မဲ့ ဘီယာဆိုင်​​တွေပဲရှိတယ်​ ။ နို့မဟုတ်​ရင်​​တော့ ည​နေပိုင်း ပိုက်​ဆံ နှစ်​ရာနဲ့ လက်​ဖက်​ရည်​တစ်​ခွက်​​သောက်​ လမ်းသွားလမ်းလာ​လေးထိုင်​ကြည့်​ ။ အကြမ်းအိုးနှစ်​လုံး​လောက်​​သောက်​ရင်း ​လေကန်​ လို့ရတဲ့ လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​​လေးကို မသွားရမ​နေနိုင်​ အစွဲအလမ်းတစ်​ခုလို တပ်​မက်​စွာ ထိုင်​​ပေ​ရော့ပဲ ။ အလုပ်​လက်​မဲ့ဘ၀မှာ တစ်​​နေကုန်​ အိမ်​မှာထိုင်​ရတာငြီး​ငွေ့လာ​တော့လည်း ည​နေပိုင်းကျရင်​ သွား​နေကျ လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​​လေးဆီ ​ရောက်​​ရောက်​သွားရ​ပေါ့ ။ ထိုင်​​နေကျ လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​​လေး​ရောက်​​တော့ သူငယ်​ချင်းတစ်​​ယောက်​က ​ဘောလုံးပွဲ အ​ကြောင်း​မေးတာနဲ့ ပွဲစဉ်​​လေး အင်​တာနက်​ဖွင့်​ကြည့်​​ပေး ။ အင်​တာနက်​ဖွင့်​ရင်း မထူးပါဘူး​လေဆိုပြီး ​မေးလ်​​လေးပါ စစ်​လိုက်​ဦးမှ ဆိုပြီး ​မေးလ်​ဖွင့်​လိုက်​​တော့ ထူးထူးခြားခြား ​မေးလ်​တစ်​​စောင်​​ရောက်​​နေပါ​ရောဗျာ ။ ဘယ်​သူ့ဆီက ထင်​သလဲ ။ ကျုပ်​တို့ သူဂျီး ဆီက​မေးလ်​ဗျ ။ စာမူခ တစ်​သိန်း​ပေးဖို့ဆက်​သွယ်​တာပါ ဇွဲဆု ​ပေါ့ တဲ့ ။ အဟိ ။ အဲ့သာနဲ့ ရွာထဲပြန်​၀င်​ကြည့်​​တော့ ​နေ၀န်းနီ ပွိုင့်​က 99167 လား အဲ့​လောက်​ပဲ ရှိ​သေးတာ ။ ​နေ၀န်းနီ ပြုံးမိတာက ဇွဲဆု ဆိုတာကိုရယ်​ပါ ။ ​နေ၀န်းနီ ရွာထဲစ​ရောက်​တာက ၂၀၁၀ စက်​တင်​ဘာ လထဲမှာ ။ ပို့စ်​မတင်​ရဲလို့ ကြည့်​​နေတာက ဆယ်​ရက်​​လောက်​ ။ ပို့စ်​ စတင်​တာက ​
သစ်​ပင်​​​တွေပေါ်က နာမယ်​များ http://mandalaygazette.com/26303
၂၀၁၀ စက်​တင်​ဘာ၂၅ ​ကော်​မန့်​ တစ်​ခုမှ မရ ။ ရပ်​ကြည့်​​နေမလား?
ကွန်​မန့်​ ၂ခု စရ ။ ဒါ​တောင်​ ၂၀၁၁ ဇွန်​လကျမှ ရတာပါ ။ ​ရေလာလာမ​ရောပါနဲ့
​နောက်​ပို့စ်​ ၆ခု​လောက်​ကလည်း တင်​ပြီး လ အတန်ကြာမှ မှတ်​ချက်​လာ​ရေးကြတာပါပဲ ။
ပို့စ်​တင်​တင်​ချင်း ကွန်​မက်​ လာ​ပေးသွားတာခံရတဲ့ ပို့စ်​က
” မိုးဖျက်​တဲ့ည” ဆိုတဲ့ကဗျာ​လေးပါပဲ။
ရှစ်​ပုဒ်​​မြောက်​ပို့စ်​ဖြစ်​မယ်​နဲ့ တူရဲ့ ။ ​နောက်​ မှတ်​ချက်​တစ်​ခုမှ မရတဲ့ ပို့စ်​​တွေလည်း ​တော်​​တော်​များများရှိပါတယ်​ ။ ​လေးနှစ်​​ကျော်​ ငါးနှစ်​နီးပါး ။ တင်​ခဲ့တဲ့ ပို့စ်​​ပေါင်းက ​လေးရာ​ကျော်​ ။ ဒါ​ကြောင့်​ ဇွဲဆုလို့ ​ပြောတာပါ ။ ​နေ၀န်းနီ ​ရှေ့က တစ်​သိန်းပြည့်​သွားတဲ့ မင်​ဘာ​တွေ ​နေ၀န်းနီ ​လောက်​ ကြာတယ်​မထင်​ရပါဘူး ။ ကို​ပေါက်​ဆို ခဏခဏ ဘယ်​နှစ်​ကြိမ်​မှန်း​တောင်​မသိလိုက်​ ။ ခဏချင်းပြည့်​ပြည့်​သွားတာ ။ ​နေ၀န်းနီ က​တော့ ​နေ၀န်းနီ စရိုက်​အတိုင်း စိတ်​ပါတဲ့ အ​ကြောင်းအရာမှ ထ​ရေး ထတင်​ ။ တစ်​ခါတစ်​​လေ ရွာထဲ မ​ရောက်​တာ လနဲ့ချီလို့ ။ ကိုယ်​​ရေးတဲ့စာ ​ကော်​မန့်​ ရမရလည်း ဂရုမစိုက်​ ။ ​တွေ့မှသာ ရီပလိုင်းပြန်​လုပ်​ ။ တစ်​ခါတစ်​​လေလည်းမလုပ်​ဖြစ်​ဆို​တော့ ….. ​နေ၀န်းနီ ​ရေးသမျှ ရတဲ့ ​ကော်​မန့်​လည်း သူများနဲ့စာရင်​ နည်းမှာ​သေချာပါတယ်​ ။ ကိုယ့်​က​ပေးခဲ့ တဲ့​ကော်​မန့်​ အရည်​အတွက်​ကလည်း ကာလ ရှည်​လာလို့သာ ၃၄၀၀ ​ကျော်​ဖြစ်​​နေတာ အခြားမင်​ဘာ​တွေနဲ့စာရင်​နည်းမှာပါ ။ ဘာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ ဇွဲဆု ကို ချီးမြှင့်​​ပေးတဲ့ သူကြီးကိုလည်း ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​လို့
…….. ။ ပို့စ်​ ​လေးရာ​ကျော်​ ​ကောင်း ​ကောင်း မ​ကောင်း​ကောင်း အတင်​ခံ​ပေးတဲ့ ဒီရွာကြီးကို ဘယ်​​တော့မှလည်း မခွဲပါဘူးလို့ …….. ။ ​နေ၀န်းနီ
2015 Apr 15 About naywoon ni
မြစပဲရိုး says: Many Congratulations A Ba Ni!
Please be still with us. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ခင်ဇော် says: ဝမ်းသာပါတယ် အဘနီ။
အဘနီ ရတဲ့ တစ်သိန်းဟာ ထိုက်တန်ပါတယ်။
ရကောင်းစေ ဆိုပြီး ရေးတဲ့ စိတ်နဲ့ မဟုတ်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ထိုက်တန်တာမို့ လက်ခုပ်အကျယ်ကြီး တီးသွားပါကြောင်းးး
ဦးကျောက်ခဲ says: ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါ အဘနီ … Bravo ပါဗျို့…
မမျှော်လင့် မတောင့်တ မရည်ရွယ်ပဲရတာ ဂုဏ်ယူစရာပါ…
kai says: ပို့စ်​ ​လေးရာ​ကျော်​ ​ကောင်း ​ကောင်း မ​ကောင်း​ကောင်း အတင်​ခံ​ပေးတဲ့ ဒီရွာကြီးကို ဘယ်​​တော့မှလည်း မခွဲပါဘူးလို့ …….. ။ အဲလိုပြောပြောပြီး.. ပျောက်သွားသူတွေမနည်းပါပဲ…။
အဲဒါကြောင့်..နောက်ဆို.. တပါတ်မ၀င်ပဲနေရင်.. ပွိုင့်၁၀၀၀ ပြန်နှုတ်စနစ်များတောင်လုပ်မလား… လို့..။ လောလောဆယ်တော့.. မန်ဘာအသစ်ဝင်သူတိုင်းကို.. ၆ထောင်ကျပ်ကနေ… ၁သောင်းတိုးပေးထားလိုက်ကြောင်း…။
သတင်းစာထဲ.. ကြော်ငြာထည့်ဖို့.. တကယ်တွေးတာပါ..။
Wow says: ဇွဲဆုရသွားတဲ့ ဆြာနီ လက်ဘက်ရည်တိုက်ပါ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ၀ူး ဂ မန်းဒ​လေး ဂမို့လား ? မန်းဒ​လေး လာဖို့ ကို​ပေါက်​တို့ ကို​ပေတို့ နဲ့ ချိန်​ထားသဗျ ။ လက်​ဖက်​ရည်​တင်​မဟုတ်​ပါဝူး ။ ကြိုက်​တာ​သောက်​လို့ရပါတယ်​ ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဟုတ်တယ် အဘနီ။ ကွန်မင့်တွေက ချက်ချင်းပြန်ဖြေပေးနိုင်မှ တဖြည်းဖြည်း ကွန်မင့်များတာ။ ကျမလည်း အဲဒါတွေ မသိဘူး။ ကွန်မင့်တစ်ခုကို ပြန်ဖြေရကောင်းမှန်း မသိဘူး။ ပို့စ်တင်ပြီးရင် ခဏခဏ ဖွင့်ကြည့်၇မှာကိုလည်း မသိဘူး။ ကျမဆို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အရမ်းညံ့တယ်။
Alinn Z says: အဟမ်းးး
မူးတဲ့ လက်ဖက်ရည် တိုက်ဖို့ ပိုက်ပိုက် ချန်ထားမယ် မဟုတ်လား ဦးနီ
.နေပြည်တော် ရောက်တာနဲ့ အပြေးလာခဲ့မယ်။ ပလို့ဂျိ
ဇွဲဆုကို မာနနဲ့ အတ္တဆိုတာကြီးနဲ့
လဲ သွား လဲထားရစ်တဲ့သူတချို့လည်း ရှိတယ်ဗျ။
ဇွဲဆုလေး ဘယ်လောက် အမှတ်တရ ဖြစ်လိုက်သလဲ
ခင်ဇော် says: နိ တိတ်တိတ်မနေရင် နာ ဆဲ ဒေါ့မယ်။
ရွာဂျီး ငြိမ်းချမ်းနေတာ မမြင်ချင်ဘုလာ့
Mr. MarGa says: ဘလောက်ဆဲဆဲ မှတ်တာကျလို့
တစ်ခုခုဆို သူ့ကို အရင်ထိန်းနေရတာ
Alinn Z says: ဒလောက် ဘယ်အရာမှမမြဲတဲ့ လောက ဖရိုဖရဲကြှီးထဲမယ်
နာမည် ကျန်နေရစ်မယ်တို့ ဘာတို့. . .
ပလို့ဂျိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: အဘနီဆိုတာ ကျမတို့ရွာထဲဝင်ခါစကတည်းက တွေ့နေရတဲ့ ရွာ့ဆယ်လီတစ်ယောက်ပေ့ါ။
အဘနီနဲ့ တန်းတူဝင်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာတော့၁သိန်းရတာ အတော်လေးနောက်ကျတယ်ပြောရမယ်။
အဲလိုပွိုင့်ကို မတွက်ပဲရွာထဲဝင်တဲ့ ရွာသူားကမှ သဂျီးအတွက်ပိုတွက်ခြေကိုက်မယ်။ ကိုယ်လည်းနီးလာပြီမို့ မျှော်ကြည့်တာ။
အာဂပြောခဲ့ဖူးသလို နောက်မျိုးဆက်ကို ယူဇာနိမ်းနဲ့ ပ့ါစ်ဝေ့ါပေးရတဲ့အထိတော့ မဖြစ်လောက်ဘူး ထင်ပါရဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .ဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုနေ၀န်းနီေ၇
.ကျုပ်လည်း ၂၀၁၀ ကတည်းက၀င်လာတာပဲ..ပို့စ်က ၁၀၀ မကျော်သေး
.တော့တန်းထဲတော့ပါနေပီဗျ..အရင်ထက်စာရင်နီးလာပီပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဂုဏ်ယူပါတယ် ဘနီ… ပို့စ် ၄၀၀ ကျော်ဆိုတာကြီးကိုလည်း မျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ ကြည့်သွားပါတယ်လို့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ကျတော်လည်းအဲ့အချိန်လောက်ရောက်တာပဲ ပို့စ်တွေတင်ပြီး မဖတ်ဖြစ်တာနဲ့ ဇွဲဆုကိုမရသေးဘူး။ အခု ရအောင်ကြိုးစားလိုက်ဦးမယ်။ :D
uncle gyi says: ကိုနီကမှတော်သေး